Indlela Yokuhlunga Imilayezo Yesigaxekile Ngokufanele - Amathiphu Ovela Kuchwepheshe We-Semalt
U-Ivan Konovalov, isazi Semalt , uthi isihlungi sokugaxekile se-Gmail sibhekwa njengenye yezinhlelo zokuhlunga okuphambili kogaxekile. Kuyasiza ukugwema imilayezo engenamsebenzi nemilayezo engenangqondo ebhokisini lakho lokungenayo. I-Gmail iyona mhlinzeki wensizakalo ye-imeyli engcono kunazo zonke futhi enhle kakhulu nenani elikhulu labasebenzisi emhlabeni jikelele. Ngokwesilinganiso, abantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezimbili basebenzisa i-Gmail njenge-ID yabo eyinhloko ye-imeyili. Kusungulwe ngo-2004, i-Gmail isizithuthukise ngokwayo futhi yaqala ukusinika ezinye izihlungi ezinhle ukuze siphume ama-imeyili ogaxekile. Esinye sezici zayo eziheha abasebenzisi yizikhono zokuhlunga ugaxekile ngempela - what is pr9 links. Njengo-Rediff, i-MSN, ne-Yahoo, i-Gmail yenza kube lula ngathi ukuvimbela imilayezo yogaxekile futhi siyiqondise kabusha kufolda yogaxekile ye-Trash Can.
Kuyini i-Gmail Spam Filter?
Isihlungi sokugaxekile se-Gmail sesibe ngcono futhi sisebenze ngaphezu kweminyaka..Njengoba yenza kube lula ngathi ukuvimbela imilayezo yogaxekile, kuzomele sihlole amakhono ayo kanye nezici ngaphambi kokunquma ukuthi kungcono yini kuma-imeyili ethu ebhizinisi noma cha. Okokuqala, ukuhlunga kuyinkqubo ehlunga izinto ezingenalutho nezingenangqondo, ezishiya lokho okuwusizo futhi okuhle. Ngendlela efanayo, isihlungi sokugaxekile se-Gmail siphumelele imilayezo engenamagama nama-imeyili aqukethe izixhumanisi ezisolisayo noma okunamathiselwe.
Yini eyenza ukuthi iyingqayizivele indlela ephethe ngayo ama-imeyili nemiyalezo yakho. Ngokuvamile, abasebenzisi akudingeki ukususa ama-imeyili asolisayo ngesandla njengesihlungi se-spam se-Gmail esisebenza esikhundleni sakho. Noma kunjalo, uma ucabanga ukuthi i-imeyili noma umthumeli usolisa, ungamane udale isihlungi ku-akhawunti yakho ye-Gmail futhi wengeze ukuthi i-imeyili kusihlungi ukuvimbela ama-imeyli noma imilayezo esizayo.
Izihlungi zogaxekile ze-Gmail:
I-Blatant Blocker inika abasebenzisi ukususa ugaxekile ngesandla, ukwandisa izinga lokunciphisa amawebhusayithi abo. Iphinde ivimbele abagaxekile ukuba bakuthumele imilayezo engenamsebenzi.
Isihlungi se-bulk imeyili sisebenza uma uthola inamba enkulu yama-imeyili avela kumthumeli ofanayo. Ubeka amazinga okuhlukumeza kanye nezihlungi ogaxekile njalo.
Izihlungi zesigaba se-Gmail zisiza ukuhlunga imilayezo ethile yomsindo wogaxekile equkethe okuqukethwe okufana nokunamathiselwe nge-imeyili, izithombe, okuqukethwe kocansi, kanye nezimemo zokugembula.
I-Null Sender Disposition Ivimbela ngokuzenzakalelayo amakheli e-IP wabathumeli abaye bakuthumela imilayezo engenamsebenzi kakhulu nsuku zonke.
Izihlungi ze-Gmail zisebenza nini?
Ngenhlanhla, izihlungi zogaxekile ze-Gmail ziqhubeka zihlola imiyalezo yakho engena ebhokisini lakho lokungenayo. Isibonelo, isihlungi sesigaba sogaxekile sisetshenziswe uma ukubhaliswa kwe-newsletter kukucasula nsuku zonke. Nokho, ungakhetha ukuthi ubani okufanele akuthumelele imiyalezo futhi akufanele. Uma kwenzeka, awulungise noma iyiphi yalezi zilungiselelo, izihlungi zogaxekile ze-Gmail zizoqhubeka zisebenza zodwa, zikunikeze isipiliyoni esihle kakhulu se-imeyili.